လှပသောသဘာဝရှုခင်း ၅ ခု | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ခရီးသွားနေရာများ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်တွင်ရှိသည် လှပသောသဘာဝရှုခင်းများ အကြောင်း, သူတို့သည်အချိန်၌ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုးနိုးကြားကြားရှိပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပြveryနာများကိုအလေးအနက်ထားရမည်။
ဒီနေ့ငါတို့ရွေးလိုက်ပြီ သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်လှပသောရှုခင်းငါးခု။ အချို့သူများသည်အခြားသူများထက် ပို၍ လူကြိုက်များကြသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်သင်၏အသက်ရှုခြင်းကိုပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်
1 Zhanjgiajie အမျိုးသားဥယျာဉ်
3 Iguazu ရေတံခွန်
ဒါကအလှဆုံးတစ်ခုပါ တရုတ်သဘာဝပန်းခြံများ။ ဤတွင် visitors ည့်သည်များတက်နိုင်သည်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်၊ တောင်တက်နိုင်သည်။ လေးနေရာရှိပါတယ်, တောင်ဘက်, အရှေ့ဘက်, မြောက်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်။ တောင်ဘက်တွင် Golden Whip Stream ရှိပြီး Zhangjiajie မြို့နှင့်အနီးဆုံး၊ အရှေ့ဘက်တွင် Suoxiyu မြို့၊ မြောက်ဘက်တွင် Tianzi တောင်တန်းနှင့်အနောက်ဘက် Yangjiajie တို့ဖြစ်သည်။ ဤဒေသများတစ်ခုချင်းစီကိုအထူးဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
La Tianzi တောင်တန်း ၎င်းသည်၎င်း၏မြူခိုးနှင့်မိုးတိမ်များကြောင့်ကျော်ကြားသည်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအပိုင်းဖြစ်သည် Yuanjiajie, Laowuchang ၎င်းသည်မဖွံ့ဖြိုးသေးပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်သဘာဝကျသောကဏ္ sector တစ်ခုဖြစ်သည်။ Yangjiajie သည်မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ က ရွှေနှင်တံစီး ၎င်းသည်အလွယ်တကူသွားလာနိုင်ပြီးအလွန်သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်areaရိယာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အဝါရောင်ကျောက်ခေတ်သည် Yuanjiajie နှင့်အတော်လေးဆင်တူသော်လည်း ပို၍ ထူးခြားသည်။
Yuanjiajie သို့သွားရောက်ခြင်းသည် ၃ နာရီခန့်ကြာပြီးပန်းခြံ၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည် Avatar Mountain Hallelujah။ များသောအားဖြင့်လူတွေများတယ်၊ အထူးသဖြင့်ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်၊ မေလ၊ တောင်သည်မတ်စောက်။ မြင့်မားသောတောင်ထိပ်များ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ထူးဆန်းသောကျောက်တုံးများဖြင့်ဝန်းရံထားသောစင်မြင့်တစ်ခုရှိသည်။ တောင်အောက်မှာသွားနေတဲ့စိတ်ကူးတံတားတစ်ခုရှိတယ်။
လည်းဖြစ်ပါတယ် ပျောက်ဆုံးသွားသောဝိညာဉ်၏ပလက်ဖောင်း Mihun Tai, Yuanjiaji အတွင်းပိုင်းမီတာ 800 ခန့်, ထိပ်မှ zigzagging လမ်းကြောင်းနှင့်အလွန်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရှုခင်းနှင့်အတူ တရာနဂါးဓာတ်လှေကားအမြင့် ၃၃၅ မီတာအမြင့်ရှိတောင်နှင့်အတွင်းကားကိုသုံးစီးဖြင့်ခရီးသည်များကြည့်ရှုနိုင်သည် Soldiers Spirit Gate.
အထင်ကြီးစရာပါ! ထို့နောက်နောက်ထပ်နှစ်နာရီကြာမြင့်သည်။ ၁,၁၈၂ မီတာမြင့်သော Tianzi တောင်တန်း၊ Dian Jiang Tai၊ တိမ်တိုက်များနှင့်ကျောက်ဆောင်တိုင်များပြည့်နှက်နေသော Yubi Feng Pagoda၊ ၁၀ မိုင်ရထား၊ သင့်အားချိုင့်ဝှမ်းသို့စီးဆင်းစေသည်။ ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ။
Zhangjiajie အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် Zhangjiajie မြို့လယ်မှကားဖြင့်မိနစ် ၄၀ ခန့်ကားဖြင့်သွားလာနိုင်သည်။ ပန်းခြံသို့ဝင်ရန် ၂၄၈ ယွမ်ရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုသင်ပြီးအောင်လုပ်ရန်ကြံစည်ပါကနှစ်ရက်မှသုံးရက်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများကိုကြည့်ပြီးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပင်ကူကကေးလ်သည်ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်ရှိသည် ကြက်ဆင်။ တူရကီတွင်နာမတော်ကိုဆိုလိုသည် "လဲမှို့ရဲတိုက်"ဂရိနှင့်ရောမအပျက်အယွင်းများဖြစ်သောဟီရာပိုလစ်စ်မြို့ရှိရေကန်များနှင့်ရေတံခွန်များအပြင်၊ သတ်မှတ်မည် Pamukkale - Hierapolis သည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်သည် နှင့်နှစ်စဉ်သန်းပေါင်းများစွာကလူကဒီကိုသွားရောက်။
အ travertine ကျန်ကြွင်းသောအရပ် သူတို့ဟာကမ္ဘာအနှံ့မှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အရာဖြစ်ပေမယ့်ဒီဟာတွေဟာအထူးလို့ထင်ပါတယ် သူတို့သည်စမ်းရေတွင်းများကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည် လှေခါးထစ် စိတ်ကူးယဉ်အရောင်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရှေးဟောင်းပျက်စီးခြင်း setting ကိုရှိသည်။ ရောမတို့တစ်ချိန်ကရေချိုးခဲ့သည်၊ ရေမှာ ၃၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပြီးသတ္တုဓာတ်ပေါများသည်။ ရောမကော်လံများကြားရေကူးနိုင်သည်။
Pamukkale ဖြစ်ပါတယ် ခန္ဓာဗေဒ၌တည်၏လူကြိုက်များသော Kusadasi သင်္ဘောဆိပ်မှကီလိုမီတာအနည်းငယ်မျှသာရှိသောကြောင့် its ည့်သည်အများစုမှာအေဂျီယန်နှင့်မြေထဲပင်လယ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောသင်္ဘောသားများဖြစ်သည်။ ထိုနေရာသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာကားငှားရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် Kusadasi မှ ၃ နာရီ၊ Anatlya နှင့် Marmaris မှ ၄ နာရီနှင့် Bodrum မှငါး ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် Denizli ကနေမိနစ် ၄၀ လောက်စီးတဲ့ဘတ်စ်ကားတွေရှိတယ်။
သငျသညျလူအစုအဝေးကိုကြိုက်နှစ်သက်မဟုတ်လျှင် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ Pamukkale ရွာမှာညအိပ်ပြီးမနက်စောစောစူးစမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ဆောင်းရာသီ၊ နိုဝင်ဘာမှမတ်လများ၊ အလည်အပတ်ခရီးသည်တောင်ဘက်ဝင်ပေါက်မှ စတင်၍ အဆင်ပြေသည်။ သင်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ဖိနပ်မဝတ်နိုင်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကူးကဘာမှမတိုက်တွန်းဖို့မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဖိနပ်ကအိတ်ထဲကိုသွားတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ swimsuit ။ နောက်ဆုံးတွင်အမြင့်ဆုံးကျန်ရှိနေသေးသောသက်တမ်းအရင့်ဆုံးရေကန်တွင်အပြီးသတ်နိုင်ရန်ရေကန်အတော်များများသို့ရေငုပ်များပါဝင်သည်။
Pamukkale - Hierapolis ကိုနိုဝင်ဘာမှမတ်လ ၆ ရက်မှ ၆း၃၀ နာရီအထိ၊ Aprilပြီလမှအောက်တိုဘာလ ၆ ရက်အကြားညသန်းခေါင်အထိဖွင့်သည်။ အထွေထွေဝန်ခံချက် TL6နှင့်ရေကူးကန်ဟောင်း TL6ကုန်ကျသည်။ အောက်တိုဘာမှမတ်လ ၈ ရက်မှညနေ ၅း၅၀ နာရီ၊ Aprilပြီလမှအောက်တိုဘာလမနက် ၈ နာရီမှည ၇း၃၀ အထိဖွင့်လှစ်ကြောင်းသတိရပါ။
ဒီသဘာဝရှုခင်း အာဂျင်တီးနား၌တည်ရှိ၏, တောင်အမေရိက, Misiones ပြည်နယ်ရှိIguazúအမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်း၌ရှိသည်။ အဆိုပါခုန်စနစ်ကရေးစပ်သည် ၇ ရေတံခွန်များ ပါရာနာနက်တော၌ ၁၇ ဝကီလိုမီတာအကွာရှိပါရာနာမြစ်၏ရေဝန်းကျင်မှအာဂျင်တီးနား၊ ဘရာဇီးနှင့်ပါရာဂွေးအကြားသုံးဆနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောပရာနာနာတော၌ဖုံးကွယ်ထားသည်။
ရေတံခွန်များကိုမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ၎င်းတို့သည်အကျယ် ၂.၇ ကီလိုမီတာရှိပြီးအမြင့်သည် ၆၀ မှ ၈၂ မီတာအထိရှိပြီးပျမ်းမျှရေစီးဆင်းမှုမှာတစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၈၀၀ ကုဗဖြစ်သည်။ ရေတံခွန်၏သုံးပုံနှစ်ပုံသည်အာဂျင်တီးနားဘက်သို့ရောက်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးခရီးစဉ်သည်ဤဘက်ခြမ်းတွင်ဖြစ်သည်။ ဘရာဇီးဘက်ကကြည့်လျှင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှသည်။ အကြံဥာဏ်လား။ ကူးကူးသွားပါ။
အာဂျင်တီးနားဘက်သို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တွင်အကောင်းဆုံးအချက်မှာ၎င်းကိုရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည် စာတန်ရဲ့လည်ချောင်းအနက်ဆုံးသောအနက်ဆုံးသောအနက်ဆုံးအနက်ဆုံးအနက်ဆုံးတွင်းအနက် ၈၂ မီတာနှင့် ၁၅၀ ကျယ်ပြန့်သည်။ ၎င်းသည် U-shaped ဖြစ်ပြီးရေတံခွန်သည်အနီးအနားရှိစင်မြင့်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။
လက်မှတ်များကိုအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ပန်းခြံ၏လက်မှတ်အရောင်းဆိုင်များမှအာဂျင်တီးနားပီဆိုသို့မဟုတ်ကဒ်များတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ပန်းခြံကိုနေ့တိုင်းဖွင့်ထားသည် နံနက် ၈ နာရီနှင့်ညနေ ၄း၃၀ အထိ ၀ င်ရောက်နိုင်သော်လည်းည ၆ နာရီတွင်ပိတ်နိုင်သည်။ ပန်းခြံကကြီးမားပြီး ၂ ရက်အတွင်းသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်ပထမတစ်ခု၏အဆုံးတွင်သင်ထွက်ခွာသောအခါသင်၏အကြံအစည်ဖြစ်ပါကသင်လက်မှတ်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ဆက်တွဲတစ်ရက်အတွက်လက်မှတ်၏ ၅၀% လျှော့စျေးရရှိသည်။ သင်ဟာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်ပေါ် မူတည်၍ ဒီစျေးနှုန်းကမတူသောကြောင့်သင်ဟာစာရွက်စာတမ်း (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူသွားရပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ် နော်ဝေတွင် ထိုသို့တစ် ဦး ပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏ 604 မီတာမြင့်သောအလွန်မတ်စောက်သောချောက်ထဲ နှင့် Lysefjorden fjord ကျော်မျှော်စင်။ ကမ်းပါးထိပ် ၎င်းသည်အပြားဖြစ်ခြင်းနှင့် ၂၅ မီတာမှ ၂၅ မီတာတိုင်းတာခြင်း၏ထူးခြားချက်များရှိသည် ဒါကြောင့်သဘာဝကလေ့လာရေးကုန်းပတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Preikestolen သည်နော်ဝေးနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း၊ Rogaland ခရိုင်တွင်ရှိပြီးနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့များဖြစ်သော Stavanger မှ ၂၅ ကီလိုမီတာသာရှိသည်။ သင်သည်ဤမြို့မှကား၊ ဘတ်စကားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Tau မှကူးတို့ဖြင့်သော်လည်းကောင်းချောက်ထဲသို့သွားနိုင်သည်။ တောင်တက်ခြင်းသည်လုံးဝမလွယ်ကူပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံဆောင်းတွင်းနှင့်နွေ ဦး ရာသီ၌နှင်းနှင့်ရေခဲများဖြင့်မတ်စောက်။ မလွယ်ကူပါ။
နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းသည်ဘရတ်တီလီမှလေးနာရီမှငါးနာရီကြာမြင့်သည်။ ခရီးသည်ကူးတို့ထဲမှတစ်ခုသည်လာဗိုက်မှရပ်နားသည်။ သို့မဟုတ်၎င်းကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံး fjord ကိုယ်တိုင်မှလှေဖြင့်လည်းရောက်နိုင်သည်။ အမှန်တရားကတော့တောင်တက်နည်းနည်းလေးတောင်းဆိုရတာကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ idedပြီလမှအောက်တိုဘာလအထိ ided ည့်လမ်းညွှန်ပါသောခရီးစဉ်များကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်သည်။
ဤစိတ်ကူးဥမင်များ တောင်အမေရိက, ချီလီ၌ရှိကြ၏။ သူတို့ကစပိန်ဘာသာနဲ့နာမည်ရတယ် စကျင်ကျောက် Chapel သူတို့ဖြစ်ကြသည် အထွေထွေ Carrera ရေကန်၌တည်၏, စင်ကြယ်သောစကျင်ကျောက်တစ်ကျွန်းဆွယ်ပေါ်မှာ ချီလီ patagonia။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံသုံးခုဖြစ်သည့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ Chapel နှင့်ဂူများဖြစ်သည်။
ဘူမိဗေဒပညာရှင်များက၎င်းတို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းခြောက်ထောင်ကလှိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း၊ ကျောက်တုံးကိုထပ်ခါထပ်ခါဆေးကြောခြင်း၊ ထူးဆန်းသောပုံစံများနှင့်နံရံများသို့လှည့်ပေးခြင်းဖြင့်အိုင်၏ရေရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့်အပြာရောင်အပြာရောင်ဖြစ်သည်။ ဒီကိုရောက်ဖို့လှေဖြင့်သာဖြစ်နိုင်သည်, ရာသီဥတုသာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်နာရီဝက်လောက်လည်ပတ်တဲ့ခရီးစဉ်တွေအကြောင်း။
အလည်အပတ်ခရီးရမည့်နှစ်၏အကောင်းဆုံးအချိန်သည်စက်တင်ဘာမှဖေဖော်ဝါရီလကြားဖြစ်သည် အိုင်၏ရေခဲအရည်ပျော်နှင့်ရေလှပသောစိမ်းအရောင်ပေါ်ယူသောအခါ။ ကူးတို့ချီလီချီကိုမှထွက်ခွာသည်။ သင်နည်းနည်းသာစွန့်စားလိုလျှင်ကေးရှင်းခြင်းကိုသွားနိုင်သည် လမ်းပြများကသင့်ကိုထိုနေရာတွင်ခေါ်သွားပြီးတောက်ပသောစကျင်ကျောက်နှင့်တောက်ပသောအရောင်များဖြင့်ဥမင်များနှင့်ဥမင်များကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ အကယ်၍ နေရောင်ခြည်ထွက်လာပါကအပြာရောင်နှင့်အဝါရောင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများစွာရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွားနေရာများ »5လှပသောသဘာဝရှုခင်းများ